ကောင်းကင်ဘုံတရားသူကြီး - ဆွစ်ဇာလန်နိုင်ငံ၏ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာဘုရားကျောင်း
ဆောင်းပါး > အနာဂတ် > ကောင်းကင်ဘုံ၌ရှိတော်မူတရားသူကြီး
Wenn wir verstehen, dass wir in Christus leben, weben und sind, in dem Einen, der alle Dinge erschaffen und alle Dinge erlöst hat und der uns bedingungslos liebt (Apostelgeschichte 12,32; ကောလောသဲမြို့ 1,19စာ-၄၆; ယော 3,16-17), können wir alle Furcht und Sorge darüber, «wo wir bei Gott stehen» ablegen, und anfangen, wirklich in der Gewissheit seiner Liebe und lenkenden Macht in unserem Leben zu ruhen. Die ist das Evangelium eine gute Nachricht, und es ist in der Tat nicht nur für einige wenige, sondern für alle Menschen eine gute Nachricht, wie wir in 1. ဂျိုဟန် 2,2 ဖတ်ပါ။
၀ မ်းနည်းစရာဖြစ်သော်လည်းယုံကြည်သူခရစ်ယာန်များစွာသည်နောက်ဆုံးသောတရားစီရင်ခြင်းကိုကြောက်ကြသည်။ မင်းလည်းဖြစ်နိုင်တယ်။ အမှန်မှာ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ကိုယ့်ကိုယ်ကိုရိုးသားပါကဘုရားသခင်၏စုံလင်သောဖြောင့်မတ်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကျရှုံးစေသောနည်းလမ်းများစွာရှိသည်ကိုကျွန်ုပ်တို့အားလုံးသိသည်။ သို့သော်ဆုံးဖြတ်ချက်ချခြင်းကိုမှတ်မိရန်အရေးကြီးဆုံးအချက်မှာတရားသူကြီးဖြစ်သည်။ အပြီးသတ်တရားစီရင်ဆုံးဖြတ်ရာတွင်တရားသူကြီးသည်ကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ယေရှုခရစ် မှလွဲ၍ အခြားသူမရှိပါ။
သင်သိသည့်အတိုင်းဗျာဒိတ်ကျမ်းသည်နောက်ဆုံးတရားစီရင်ချက်နှင့် ပတ်သက်၍ များစွာပြောစရာရှိသည်။ ကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်များကိုကျွန်ုပ်တို့စဉ်းစားသောအခါ၎င်းအချို့သည်ကြောက်စရာကောင်းသည်။ ဒါပေမယ့်ဗျာဗျာတရားသူကြီးအကြောင်းပြောစရာတွေအများကြီးရှိတယ်။ သူကသူ့ကို“ ငါတို့ကို ချစ်၍ မိမိအသွေးတော်အားဖြင့်ငါတို့အပြစ်များကိုရွေးနှုတ်တော်မူသောသူ” ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ယေရှုသည်အပြစ်သားများကိုချစ်မြတ်နိုးပြီးတရားမျှတသောကြောင့်သူသည်သူတို့အတွက်အသေခံပေးခဲ့ပြီးသူတို့၏ကိုယ်စားသူတို့ကိုယ်စားရပ်တည်ခဲ့သည်။ ထိုထက်မကသူသည်သူမအတွက်သေခြင်းမှထမြောက်ခဲ့ပြီးသခင်ယေရှုကဲ့သို့ချစ်သောခမည်းတော်၏ဘ ၀ နှင့်မျက်မှောက်တော်သို့ရောက်ရှိစေခဲ့သည်။ ယင်းကကျွန်ုပ်တို့ကိုသက်သာမှုနှင့်ရွှင်လန်းမှုနှင့်ပြည့်စေသည်။ သခင်ယေရှုကိုယ်တိုင်တရားသူကြီးဖြစ်သောကြောင့်ထိုစီရင်ချက်ကိုကျွန်ုပ်တို့ကြောက်ရွံ့စရာအကြောင်းမရှိပါ။
ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘုရားသခင်ထံချဉ်း ကပ်၍ ယေရှုခရစ်ကိုယုံကြည်ကိုးစားသောအခါ၊ ကျွန်ုပ်တို့သည်ဘဝသစ်သို့ခြေလှမ်းလှမ်းသည်။ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်သည်ကျွန်ုပ်တို့အတွင်း၌ကျိန်းဝပ်ကာကျွန်ုပ်တို့၏အပြစ်ဒုစရိုက်များ၏အလေ့အထများ၊ သဘောထားများနှင့်စဉ်းစားတွေးခေါ်ပုံနည်းလမ်းများအားဖြင့်ခရစ်တော်၏ပုံသဏ္ဌာန်တော်အတွင်းသို့အသွင်ပြောင်းခြင်းကိုစတင်သည်။
ယင်းသည်တစ်ခါတစ်ရံနာကျင်စေနိုင်သော်လည်း၎င်းသည်လွတ်မြောက်စေပြီးလန်းဆန်းစေသည်။ ဤအရာအားဖြင့်ကျွန်ုပ်တို့သည်ယုံကြည်ခြင်း၌ကြီးထွားလာပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်ကို ပို၍ ချစ်မြတ်နိုးလာသည်။ ထို့အပြင်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားသူကြီးဖြစ်သောကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ရှင်အကြောင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ပိုမိုသိရှိလေတရားစီရင်ခြင်းကိုကျွန်ုပ်တို့ကြောက်ရွံ့လေလေဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်သခင်ယေရှုကိုသိသောအခါကျွန်ုပ်တို့သည်ယေရှုကိုယုံကြည်ကိုးစားပြီးကျွန်ုပ်တို့၏ကယ်တင်ခြင်းကိုအပြည့်အဝယုံကြည်စိတ်ချနိုင်သည်။ ငါတို့ဘယ်လောက်ကောင်းသလဲဆိုတာတော့မဟုတ်ဘူး။ သောအချက်ဘယ်တော့မှဖြစ်ခဲ့သည်။ သူဘယ်လောက်ကောင်းတယ်ဆိုတာအမြဲတမ်းပဲ။ ၎င်းသည်သတင်းကောင်းဖြစ်သည် - လူတိုင်းကြားနိုင်သည့်အကောင်းဆုံးသတင်း!